Rakaab Maraykan ah o Ka baqay Niman Muslin ah o diyaarad la raacayay lkn Codsadayna… | Biyoguurenews.com
Home Wararka Rakaab Maraykan ah o Ka baqay Niman Muslin ah o diyaarad la...
Rakaab Maraykan ah o Ka baqay Niman Muslin ah o diyaarad la raacayay lkn Codsadayna…
Laban in oo ah Muslimiinta Mareykanka ayaa dalbaday baaritaan, kadib markii ay shegeen in lagu la kacay naceyb ku saleysan diinta, xilli ay kusii jeedeen Magaalada Dallas ee dalka Mareykanka.
Abderrauuf Alkhawaldeh iyo Issam Cabdallah ayaa sheegay in laga baajiyay diyaaradii ay raaci lahaayeen, kadib markii qaar kamid ah shaqaalaha diyaaradda American Airline ay shegeen in aysan ku qanacsaneyn in ay diyaaradda la raacaan raggaas Musliimnta ah.
“Sharaf dhac aya maalinkaas ku ahayd noolasheyda, ” ayuu yir Cabdullaahi oo la hadlayay weriyeyaasha.
Mid kamid ah labada nin ayaa dhowr jeer dhoolacadeeyay xilli uu ka soo baxayay qolka nasiinada ee garoonka, waxaana taas ay keentay in laga shakiyo labadooduba.
War qoraal ah oo ka soo baxay shirkadda ayaa lagu sheegay in walaac ka yimid shaqaalaha iyo mid kamid ah rakaabka ay sababtay in raggaas diyaaradda laga baajiyo.
“Amerika Airline iyo dhamaan shirkdaha aan bahwadaaga nahay waxaa mas’uuliyad ka saran badqabka iyo walaaca amni ee ay muujiyeen shaqaalaha iyo rakaabka diyaaradaha”, ayaa lagu sheegay warsaxaafadeed ka soo baxay shirkadda duulimaadyada ee American Airline.
Alkhawaldeh iyo Cbdallah ayaa dhibatada loo geystay ka sheegay shir jaraa’d oo ay qabteen, kaas oo ay soo qabanqaabiyeen Golaha Islaamka ee Mareykanka. 14 kii bishan Sabtembar, labadan nin ee Muslimiinta ayaa qorshuhu ahaa inay ka soo safraan Magaalada Birmingham, iyagoona kusii jeeday Dallas.
Labadooduba ma aysan ahayn kuwa isla socday oo iska war hayay oo si kala gooni ah ayay u safrayeen, balse wxaay isku aqoonsadeen markii ay isugu yimaadeen garoonka.
Labadan nin ayaa arrinkan ogaaday kadib markii shaqalaaha diyaaradda ay ku dhawaaqeen in diyaaraddi ay dib dhacday, laguna wargeliyay in aysan raaci karin diyaaradda.
Markii shaqalaah diyaaradda ay ku dhawaaqeen arrinkan ayaa Alkhawaldeh waxaa uu maqlay qof kamid ah shaqaalihii diyaaradda oo leh “Waxaa arrintan loo sameeyay sababo amni”.
Xoogahaa kadib markii ay arrintaas dhacday ayaa waxay shegeen in uu u yimid nin dhar cad ah, kadibna ay u yimaadeen ciidamo katirsan booliiska FBI-da Mareykanka. Mid kamid ah raggii Muslimiinta ayaa la geeyay qol gaar ah, waxaana la weydiiyay magaciisa iyo shaqada uu qabto, waxaa kale oo loo sheegay in alaabtoodi dib loo baari doona.
Markii uu Abdullahi weydiiyay waxa dhacay ayaa waxaa loo sheegay in shaqaalihii diyaaradda ay booliska u yeereen, ayna ku yirahdeen “Kuma faraxsanin in aan diyaardda la raacno raggan”.
Sababta looga shakiyay raggan ayaa la sheegay inay ahayd in mid kamid ah uu galay qolka nasiinada laba jeer, ayna ka muuqatay farxad xad-dhaaf ah.
Sida uu sheegay Cabdullahi, FBI-da ayaa raaligeliyay, kuna wargeliyay in uu raadsado diyaaradda xigta, walow uu sheegay in uu dareemay fuquuq ka dhan ah jinsiyadiisa iyo diintisa.
Rakaabkan ayaa loo raadiyay duulimaad kale oo kusii jeeday Dallas.
Maxay shirkadda ka tiri arrintan?
“Waxaa inaga go’an in aan khibard wax ku ool ah kula dhaqano qofwalba oo ku safraya shirkadeena,” ayay tiri shirkadda America Airline.
“Kooxdeenu waxay ka shaqeynayaan sidii dib u eegis loogu sameyn lahaa arrintan, waxaana la xiriirnay Alkhawaldeh iyo Cabdallah, si aynu u ogaano qaabkii ay wax ugu dhaceen.”
Shirkadda Amerika Airline ayaa sidookale marar hore lagu eedeeyay inay fuquuq kula kacdo qaar kamid ah rakaabka.
Horaantii sanadkan ayay ahayd markii shirkadda ay raaligelin ka bixisay haweeney kamid ahayd rakaabka oo lagu yiri “Inaga qari dharka aad xiran tahay oo busto dul saar”.
Sidoo kale hey’ado u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada iyo xuquuql insaanka ayaa sanadkii 2007 shirkadda America Airline ku eedeeyay inay ixtiraami darri iyo fuquuq kula kacdo qaar kamid ah rakaabka raaca diyaaraddaas.
Previous articleHogaamiyaha Iiran Hassan Rouhani o maanta o axada fariin adag u diray maraykanka